တကမ္ဘာလုံးက ဘာကာပရိသတ်တွေကို နှာနုဖြတ်ရိုက်ပေးလိုက်တဲ့ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်နည်းပြကြီး | Duwun
ဒီတခါ အန်ဆယ်လော့တီရဲ့စကားတခွန်းက ဘာကာတို့အတွက် ရိုက်ချက် တော်တော်ပြင်းပါတယ်။
ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီက ဘာစီလိုနာရဲ့ လာလီဂါ ချန်ပီယံဆု စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လှောင်ပြောင် ပြောကြားသွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ လက်ရှိ လာလီဂါ အမှတ်ပေးဇယားမှာ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်က ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်နေပြီး ဘာစီလိုနာက အဆင့် (၈) နေရာမှာသာ ရပ်တည်နေတာပါ။
ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်ဟာ ပွဲကျပ်ကာလကို အကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယနေရာက ဆီဗီလာကို (၈) မှတ်အထိ ဖြတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်နဲ့ ဘာစီလိုနာတို့အကြား ရမှတ်ကွာဟချက်က (၁၈) မှတ်အထိ ရှိနေပြီး ဘာစီလိုနာရဲ့ ကျဆင်းမှုက တော်တော်လေးကို အံ့အားသင့်စရာကောင်းနေပါတယ်။
ဘာစီလိုနာဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်း အုပ်စုအဆင့်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရပြီး လက်ရှိအနေအထားအရ လာလီဂါမှာတောင် အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ပိုင်းကို ပြန်တက်နိုင်ဖို့ တော်တော်လေးရုန်းကန်ရမှာပါ။
ဒီအနေအထားမှာ ဘာစီလိုနာတို့ လာလီဂါ ချန်ပီယံဆုဖလားကို စိန်ခေါ်နိုင်ဦးမလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီက အခုလိုပဲ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အန်ဆယ်လော့တီက “ဘာစီလိုနာက ကျနော်တို့ကို တိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်နိုင်မယ့် အသင်း? ဟုတ်လား? မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့က အခုဆိုရင် ဆီဗီလာ၊ အက်သလက်တီကို၊ ဘက်တစ်တို့နောက်မှာတောင် တော်တော်လေး ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါပြီ” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာလည်း ဒီရာသီ လာလီဂါအမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ပိုင်းမှာ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် ဦးဆောင်နေတာကလွဲရင် ကျန်တဲ့နေရာတွေက ကမောက်ကမဖြစ်နေပြီး ဆီဗီလာ၊ ဘက်တစ်၊ ဗယ်လက်ကာနိုတို့က ဆိုစီဒက်၊ အက်သလက်တီကို၊ ဗလင်စီယာ၊ ဘာစီလိုနာတို့ရဲ့အထက်မှာ ရပ်တည်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။